Indlela yoBomi intsingiselo | ImiSebenzi, ukuhambelana, uthando - Ukubhula Ngamanani
Kwinombolo, i-11, i-22 kunye ne-33 ziyabizwa amanani enkosi . Eyaziwa nangokuthi ngamanani ombane, la manani aphindwe kabini anawo ukubaluleka okukhethekileyo . Ukuba unenombolo eyi-master kwitshathi yakho yokubhula ngamanani, unethamsanqa! Kodwa kunokubakho iinzame ezongezelelweyo ezifunekayo kwi umendo wakho .
Ngokomhla wakho wokuzalwa, une inombolo yendlela yobomi 22. Indlela yakho yobomi lelinye lawona manani abaluleke kakhulu kwitshathi yamanani. Ingakuxelela ngobuntu bakho, ubudlelwane, ikhondo lomsebenzi kunye nezinto ozithandayo.
· Inombolo ye-Master 22 Ubuntu, kuquka amandla kunye nobuthathaka babo
· Benza njani umsebenzi wabo, ubudlelwane kunye nezinto abazithandayo
Ezona ndlela zobomi zihambelana kakhulu kunye nenombolo eyi-22
Ukuba ulungele ukuphonononga ubomi bakho ngoku ngokusebenzisa ulwazi lwamanani emva koko ucofe apha kufundo lwasimahla lwenombolo. Elungiselelwe igama lakho kunye nomhla wokuzalwa uya kufunda ngaphezulu kwenombolo yendlela yakho yobomi (ukukhuthazwa komphefumlo, ubuntu kunye neenombolo zekamva) ukuze ukwazi ukumisela ubuntu bakho kwaye ufumane injongo yakho yobuThixo kobu bomi.
Indlela Yobomi Inombolo yama-22 kunye neempawu
Indlela yobomi Inombolo yama-22 kuThando, ukuthandana kunye nobudlelwane
Indlela yobomi yeNombolo yama-22 yokuhambelana kobudlelwane
Indlela Yobomi Nombolo 22 Umsebenzi
Indlela Yobomi 22 Abahlobo Nosapho
Indlela yoBomi ye-22 yokuHamba neendawo zokuzonwabisa
Indlela Yobomi Inombolo yama-22 yezifundo kunye noCelomngeni
Ukuba nama-22 kwitshathi yakho yokubala ngamanani kubaluleke kakhulu.
Indlela yobomi yama-22s ngamanani 2 + 2 = 4, ke ngoko babelana ngendlela, ngokunyanzela, kunye nangengqiqo yenani le-4 ukuqonda ngokomoya.
Banelifa le- amandla ye-master number 11, ebenza ukuba babe ngababonisi abakhulu kodwa babeka umhlaba ngokwendlela eyi-4. Ngeziseko eziqinileyo, bazisa i-idealism kwi-4 yinyani kwaye yenza umahluko olungileyo kwihlabathi.
Ukudibanisa la mandla makhulu kunika amandla amakhulu angama-22 okuphumelela-awona maninzi kuwo onke amanani obomi.
Njengenkosi eyi-11, ukuhlala kwi-22s enkulu kunokuba ngomnye wemiceli mngeni kwindlela yayo yobomi. Indlela yobomi engama-22 inokubanakho ukuba ibe ‘ngumakhi oyingcibi’, besebenzisa ukuqonda kwabo ngokomoya ukwenza into engakholelekiyo emhlabeni. Kodwa kunokwenzeka ukuba i-22s iwele ngeentanda, watyunyuzwa bubunzima bamandla abo, kwaye bafeze kancinane kakhulu.
Kufuneka umonde. Njengomphathi wenombolo ye-11s, i-22s ayinakuqala ukuzibonakalisa ngokwenyani izipho zazo kude kube kukhula embindini wobomi, ngokwenani lokubala.
Kodwa ii-22s kufuneka zikulumkele ukukruquka. Kufuneka benze njalo basebenzise izipho zabo ngokukuko kwihlabathi lokwenyani okanye bangabinanjongo. Inokuba yintoni inkunkuma.
Ngethamsanqa, ii-22s zixhotyiswe ngezixhobo zangaphakathi ukwenza umahluko. Bayabuqonda ubuhle kumbono kwaye banesakhono sokuyiguqula ibe yinyani. Banokulinganisa ubunzima bezimvo ngokuchasene iiparameter ezibonakalayo , Kwaye wazi ngokungenantandabuzo ukuba iyakusebenza okanye ayisebenzi.
Inombolo 22s ikwanendawo ethile yokwabelana ngolwazi kunye nokukhuthaza abanye ukuba balandele amaphupha abo. Ngamanye amaxesha babizwa ngokuba 'ngabafundisi-ntsapho abaziintloko', kwaye ngesizathu esivakalayo- kunjalo supercharged ngetalente yokukhokela ngomzekelo.
Abantu abadumileyo abanendlela yobomi engama-22 kubalo lwabo babandakanya uPaul McCartney, uWill Smith, uDalai Lama noRichard Branson.
Ithetha ukuthini xa ndibona i-555
Ukufunda malunga neendidi zezinto oya kumangalisa kuzo xa ufundisa, cinga ngokufunda amanani. Ukufunda ngokwakho, ngokusekwe kwigama lakho kunye nomhla wokuzalwa kuya kukunceda ufumanise ukuba zeziphi na izipho eziyinyani, iitalente kunye namandla akho. Cofa apha kufundo lobuqu lwamanani. (isimahla kwaye iyacetyiswa kakhulu)
Njengamanani aphambili, amanani angama-22 ngala:
· Ukuqaqamba okunokubakho
Nangona kunjalo, ii-22s zinokubakho:
Indlela yobomi yama-22s yile ii-4s ezongezelelekileyo kwinombolo yokubala , Oko kuthetha ukuba intetho yabo yothando zi ngokufanayo nomntu. Banokujolisa ngakumbi kwiphupha labo elizukileyo kunokwabelana ngezimbo zomzimba ezithandekayo kunye nokuwela emsebenzini.
Ukuvumela i-22s ilandele amaphupha abo yenzelwe wonke umntu. Ukuba abazivezi izipho zabo emhlabeni, i-22s inakho rhoxisa , Ukuba nemood kwaye ungaqiniseki- ayisiyonto ilungileyo kubudlelwane. Amaqabane anokufumana nokuba yinxalenye ye- phupha naye.
Oko kwathiwa, i-22s yiyo uzinze kwaye uxhase ngokwasemoyeni amaqabane, nokuba ayingabo overemotional ngokwabo. Eli nani linamaxabiso emveli, kwaye liphuhlisa ubudlelwane obuqinileyo obuhlala buhleli ibalulekile kubo. Indlela yobomi ye-4, ene-22s enxibelelene ngokusondeleyo nayo, inesidingo esomeleleyo sobudlelwane obuzinzileyo kunenye indlela yobomi. Uninzi lwama-22 liza kuhlonipha iziko lomtshato. Kufuneka bazive ngathi banjalo ikhuselekile kwaye ikhuselekile kunye nembeko yomsebenzi wokubonelela ngamaqabane abo kunye nosapho.
Ukuba umntu wabo amthandayo anganika i-22 indawo kunye nenkululeko abayifunayo, baya kuba njalo uthembekile kakhulu . Kodwa ii-22s kufuneka zilumke ukuba ukuthintela iimvakalelo zabo akufumaneki kubanda okanye kungakhathali. Njengenani eliyintloko, banokulindela ukuba abanye babe zizilumko njengabo. Inokukunceda ukuba iqabane labo likwindawo efanayo yokudlala ngokwengqondo nangokweemvakalelo njengabo. Umntu onemvakalelo kakhulu unokungasebenzi nge-22.
Inombolo ye-22 yama-Master iya kukhula kakuhle nge iqabane eliqondayo kwaye ixhasa imishini yabo. Obu budlelwane basondeleyo yinxalenye ebalulekileyo yendlela yabo.
Okokugqibela, kuya kufuneka wazi amanye amanani kwitshathi yakho yokubhula ngamanani ukubonisa indlela yakho kuthando kunye nobudlelwane. Umphefumlo wakho kunye neenombolo zekamva nazo zichaphazela iintlobo zobudlelwane kunye namaqabane oza kutsala ebomini bakho. Cofa apha ukuze ufumane itshathi yasimahla yokubhula ngamanani kwaye ufumane umphefumlo kunye neenombolo zekamva lakho.
Umbono wama-22 nawo angamaqabane azinzileyo kwaye anokuthenjwa manani endlela yokuphila. Iinombolo ze-Master zihlala zixinana kwinombolo enye xa kuziwa kubudlelwane obuhambelana nokubala. Ke apha, i-22 inezinto ezifanayo ezinokubakho njengenani lesi-4 kwinombolo.
Ama-22s asebenzayo kunye nemibono aya kuba nelona thamsanqa lithandwayo:
Indlela yobomi 4
Ukuba ufuna into yenziwe, ukudibanisa ama-22 kunye no-4 kufuneka benze iqhinga. Oku kunokubandakanya ubudlelwane obuqinileyo, ngokunjalo.
Indlela yobomi 6
Ukuzinikela macala onke kuzinzo nakukhuseleko kwenza ukuba olu lwalamano luqine, ngokwe-numerology. Uhlobo lothando lwe-6 luzisa ukuhambelana koku kumataniswa.
Indlela yobomi 7
I-4 iyayithanda kakhulu imeko yokomoya kodwa i-analytic.
Indlela yobomi 8
I-4 kunye ne-8 ziqhubeka kakuhle kuba bobabini bayaqeqeshwa ngelixa i-8 izisa umbono kumbono. I-22 izisa oku nayo, enokwandisa izinto ukuba babelana ngombono omnye.
Indlela yobomi 9
I-4 esebenzayo ayihlali isebenza kunye ne-9. Kodwa eneneni, i-22 kunye ne-9 zabelana ngokufanayo- banengqondo yokusebenzela ngombono kwaye baqhuba ukwenza amaphupha abo abe yinyani.
Inani lama-22s linokuba nethamsanqa elincinci nge:
Indlela yobomi 1
Ngokujolisa kunye nokuzimisela, i-22s kunye ne-1s zininzi ngokufanayo. La manani omabini ayakonwabela ukuthatha uxanduva, olunokubangela ukungqubana.
Indlela yobomi 2
I-22 ethembekileyo inokunika okuninzi kwi-2 enobuthathaka, kodwa i-2 inokudinwa ukuba i-22 ithintelwe ngokweemvakalelo.
Indlela yobomi 3
Ngandlela thile ii-3s kunye nee-4s kufuneka zilungele omnye komnye, kodwa oku kuhlangana akubonakali kusebenza. I-3 engalindelekanga ayinakulindela ukubhenela kwi-22 efanelekileyo.
Indlela yobomi 5
I-footloose kunye ne-fancy-free 5s zikwicala eliphambeneyo le-spectrum ukuya kwi-22.U-5s ufuna inkululeko ngelixa ama-22 efuna ukhuseleko.
Ukuqonda okunzulu kokudibana kulwalamano lwakho, uya kufuna ukuthelekisa amanye amanani kwinombolo yakho. Itshathi. Unokufumana ukuba wabelana ngemibono malunga nokukhuthaza umphefumlo kunye nenqanaba lesiphelo. Ukufumana amanye amanani kwitshathi yakho, cofa apha ukuze ufunde ngokufundwa kwamanani kwasimahla.
‘Umakhi oyingcibi’ unjalo ngokoqobo njengoko isikweko. I-22s esebenzayo iya kwenza kakuhle kubizo olubandakanya ukucinga kunye ukwakha into kwihlabathi elibonakalayo. Oku kubandakanya uyilo, uyilo, ubunjineli, ubuchwephesha, kunye nolwakhiwo.
Izakhono zabo zonxibelelwano zenza ukuba ii-22s ziphumelele ekufundiseni, kwezoshishino, kwezopolitiko nakumajelo eendaba. Inombolo eyi-22 ye-Master iyakonwabela ukudala umbono ngokufezekisa isicwangciso.
Ngalo lonke ixesha banokwamkela igalelo labanye, banobuchule bobunkokeli bokugcina isikhundla esiphezulu okanye ukuqala ishishini labo. Ingqondo yabo 'yoyilo' ibenza babalasele ekwakheni imibutho. Balala iziseko eziqinileyo kwaye ubaphathe baye kugqitywa.
I-22s eqinileyo ithatha indlela yexesha elide kwikhondo labo, ubeka ezi iziseko eziqinileyo zekamva . Awuyi kubafumana bezama ukuba zizityebi kwisikimu samva nje. Nangona besebenza kwaye bezimisele ukondla usapho lwabo, akunakulindeleka ukuba bathathe umsebenzi ngemali bodwa. Banobizo oluphezulu lokusebenzela umhlaba, kwaye oku ikakhulu kubonakala ngomsebenzi wabo. Ikwabonelela ngovuselelo lwengqondo.
Unxibelelwano olunzulu kwikhondo ngama-22s ’ ibhulorho ukuya kuvuyo kwinani , kwaye kwicala elisecaleni, ukunqunyulwa kulo kunokubazisa ukuphelelwa lithemba.
Ukubala kwabo ngamanani bacebisa ukuba banomdla wokuzisa nantoni na abayibeka kwingqondo yabo ukuba ibe sisiqhamo, kwaye baya kufikelela kwinqanaba eliphezulu kwikhondo abalikhethileyo.
Ikhondo lakho lomsebenzi liya kuchaphazeleka kukukhuthaza komphefumlo, intetho, ikamva kunye neenombolo zobuntu. La manani adibeneyo ukwenza amandla akho, izipho kunye neetalente. Ukufumanisa ukuba zezi ntoni, cofa apha ukuze ufumane ukufundwa kwamanani mahala. Yenzelwe igama lakho kunye nomhla wokuzalwa.
Ngama-22 entloko ebonakalayo, bayi-a yomelele , inokuthenjwa umzobo kusapho. Banikela umzekelo omhle kubantwana babo kwaye bazimisele ukwabelana nabo ngezakhono zabo.
Ngenxa yokuzinza kwabo, usapho lwama-22 (kunye nabanye abantu) baxhomekeke kubo. Oku kulungile-badinga ukufuneka-okoko benesithuba kunye namandla aneleyo okulandela iiprojekthi zenkonzo ephezulu phaya phandle ehlabathini.
Indlela yokuphila ye-22 yokuxabisa ubuhle iya kuthanda mhlawumbi bonisa kwikhaya elihle. Basenokuba bazakhela elabo ikhaya! Kodwa kusenokwenzeka nokuba ibe lula - ayithandi izinto ezibonakalayo, kwaye banokufumana izinto ezininzi kakhulu ukuphazamisa . Ikhaya labo liyakuba nokusebenza njengoko lihle, kwaye lingabi likhulu kakhulu kwiimfuno zabo. Banengqiqo ngemali.
Njengomphathi wenombolo ye-11, i-22s nayo ikhule inovakalelo lokwahluka okanye ukungabikho ndawo, ekusenokwenzeka ukuba ibandakanya usapho lwayo lokuqala. Ukuguqula la manxeba obuntwana abe yinto elungileyo konke kuyinxalenye yendlela yabo yokuphila ngamanani.
Uninzi lwama-22s luyonwabele a Indlela yokuphila encinci kwaye musa ukuchitha imali eninzi okanye amandla ukuqokelela izinto.
Njengabaxabisi be ubuhle , Banokusebenzisa izakhono zabo ezinesiphiwo ekucwangciseni uhambo lwephupha ukubona umhlaba. Njenombolo ye-4s, kuya kucingelwa kakuhle, kunye nokugcinwa kwezinto ngokukhawuleza kugcinwe ubuncinci. Oko kwathethi, ngokusebenzisa umbono wabo iya kuba luhambo lwe ubomi bonke !
Njengabantu abasebenzayo, banokuwonwabela ukucofa izinto ngexesha labo lokuzonwabisa. Banokuboleka ngesandla kuzo zonke iintlobo zezinto, nokuba ziikhompyuter, i-DIY okanye igadi ukuba iyabathanda.
I-capricorn kunye ne-pisces ubudlelwane
Kananjalo banokuba ngabantu abasekhaya abahamba belungisa izinto. Banokusebenzisa izakhono zabo ezifanelekileyo zokugcina izinto zihamba kakuhle.
Kwinombolo yokubala, i-22 yindlela yokuphila enamandla. Kodwa ayizi ngaphandle kwemingeni yayo. Ukwenza abantu babelane ngama-22 umbono usenokuba ngumceli mngeni; abanakho ukubuqonda ubukhulu obukhulu obukhoyo ngaphakathi kwengqondo ye-22.
Ukuguqula abantu kubalulekile ekuncedeni ama-22s ukuba aqonde umbono wabo. Indlela yobomi yama-22s kufuneka iqinise amandla ngokudibeneyo ukuze ibonakalise amaphupha abo.
Ukudibanisa ukusebenza kwe-22s kunye nombono wayo wokomoya kubanika amandla amakhulu. Bagcina iinyawo zabo ziqinile emhlabeni nokuba ingqondo yabo isibhakabhaka. Ngokungafaniyo ne-11, enomgangatho 'womoya', ii-22s zinengqondo efanayo yokuzigcina zingantingeli phezulu. Kodwa bobabini babelana ngezipho ezinomdla kwizinto ezinokwenzeka.
Zeziphi ii-22s ezinokuphucula zi ukuzithemba kubuchule babanye abantu , kwaye ungalawulwa. Le ndlela yobomi kufuneka ifunde ukuba bhetyebhetye kwaye ivumele abanye babenegalelo kumbono. Wonke umntu unento anokunikela ngayo.
Yilapho i-22s kufuneka ifunde ukuzinikela kumbono obakhokelayo. Emva kwayo yonke loo nto, kufanele ukuba bazi ngokuchanekileyo ukuba badlala indima encinci kwindalo iphela, nokuba bayakwazi ukubonisa izinto ezinkulu. Ngu Ukuvumela abanye abantu ukuba benze uphawu, i-22s inokuphinda-phinda ifuthe labo emhlabeni .
Iprojekthi yokugqibela inokuphambuka kwindlela ebijongeke ngayo ezingqondweni zabo, kodwa kufuneka bazise abanye abantu kwisakhelo.
Iimpawu zeZodiac zibekwe kwiNinzi ukuya kuthi ga ngokunyaniseka
inani u-11 kwinombolo
Ingelosi yam ekhuselekileyo
ezona mpawu zibiac zintle
uyigcina njani indoda yanamhlanje yonwabile
Imidlalo ye-zodiac yeScorpio
Intsingiselo yokomoya yenombolo 333